China Gelatin yeSoftgel ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
I-Capsule ethambile uhlobo lokulungiselela okuqinile ngomlomo. Ngoba ingavala iphunga elingemnandi kokuqukethwe, ingenza iziguli zikwamukele kalula, futhi ithuthukise ukuhambisana kweziguli nemithi, okulula ukuyigwinya. Kusukela yazalwa, isibe yifomu lomthamo omkhulu embonini yezemithi. Njengamanje, ama-gelatin capsules ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-600 akhiqizwa minyaka yonke, okungukuthi, ama-capsules angama-20000 akhiqizwa njalo ngomzuzwana bese efakwa emakethe. Isizathu sokuthi i-gelatin capsule ithandwa kangaka sihlobene kakhulu nokusebenza kwayo okuhle kwezobuchwepheshe
I-Gelatin capsule ethambile ingahlukanisa umoya-mpilo, inokumelana okuhle nomswakama, futhi ingathuthukisa ngempumelelo ukuzinza kokuqukethwe;
Ama-capsules athambile we-Gelatin angahlakazeka ngokushesha, akhiphe izinto ezisebenzayo futhi athuthukise ukutholakala kokutholakala ngemuva kokuphathwa ngomlomo.
Lezi zakhiwo ziqinisekisa ukuphepha nokusebenza kokudla okusebenzayo, nokuqinisekisa impilo nokuphepha kwabantu. I-Gelatin ukuncibilika okuhle kakhulu, izakhiwo ezakha ifilimu, izakhiwo zejel eziguqukayo ze-thermo nezici zokucubungula ezilula konke kuyizinto ezisebenza ngokungenakuphikiswa ze-gelatin ekukhiqizeni i-capsule.
IGelken inikeza i-capsule gelatin ethambile embonini eyenza imithi iminyaka eminingi. Sigxila ikakhulu empilweni yezokuphepha yabantu.
Isimo sokuhlolwa: China PharmacopoeiaUhlelo luka-2015 2 Ye-Capsule Ethambile
1. Amandla Jelly (6.67%) 140-200bloom
2.Umsindo (6.67% 60 ℃) 30-40mps
17 .Isamba Sokubalwa Kwamagciwane ≤10 cfu / g
Langaphambilini I-Gelatin yama-capsule aqinile
Olandelayo: I-Gelatin yethebhulethi